Wiil soomaali ah oo wata baasaboor Swedish ah oo lagu qabtay Uganda | Somaliska
Wiil 18 sano jir ah oo isbuucaan lagu qabtay dalka Uganda ka dib markii la sheegay in uu xiriir la leeyahay xarakada al-shabaab ayaa la kulmey wakiilo ka socda safaarada Sweden ay ku leedahay Kampala. Wiilkaan oo la sheegay in uusan lahayn dhalashada Sweden balse uu watay baasaboorka loo yaqaan främlingspass oo 2 bilood ka hor uu qaatay. Wargeyska Expressen ayaa sheegay in wiilkaan uu degenaa magaalada Sundsvall asagoo haystay deganaanshaha Sweden. Wakiilada ka socda Safaarada Sweden ayaa sheegay in uu caafimaadkiisa wanaagsan yahay. Wiilkaan ayaa isbuucii la soo dhaafay laga qabtay xuduuda Uganda iyo Kenya asagoo la sheegay in uu watay 2 baasboor oo midna Swedish yahay midka kalena Kenyan yahay asagoo la sheegay in da' kala duwan ay ugu qorneyd labada baasboor. Sidoo kale ninkaan ayaa lala qabtay 2 qof oo kale ayadoo dowlada Uganda ay sheegtay in ay qorsheynayeen in ay bambaanooyin geeyaan magaalada Kampala.
Wiil 18 sano jir ah oo isbuucaan lagu qabtay dalka Uganda ka dib markii la sheegay in uu xiriir la leeyahay xarakada al-shabaab ayaa la kulmey wakiilo ka socda safaarada Sweden ay ku leedahay Kampala.
Wiilkaan oo la sheegay in uusan lahayn dhalashada Sweden balse uu watay baasaboorka loo yaqaan främlingspass oo 2 bilood ka hor uu qaatay.
Wargeyska Expressen ayaa sheegay in wiilkaan uu degenaa magaalada Sundsvall asagoo haystay deganaanshaha Sweden. Wakiilada ka socda Safaarada Sweden ayaa sheegay in uu caafimaadkiisa wanaagsan yahay.
Wiilkaan ayaa isbuucii la soo dhaafay laga qabtay xuduuda Uganda iyo Kenya asagoo la sheegay in uu watay 2 baasboor oo midna Swedish yahay midka kalena Kenyan yahay asagoo la sheegay in da’ kala duwan ay ugu qorneyd labada baasboor.
Sidoo kale ninkaan ayaa lala qabtay 2 qof oo kale ayadoo dowlada Uganda ay sheegtay in ay qorsheynayeen in ay bambaanooyin geeyaan magaalada Kampala.
Haweeney saaxiibkeed dhamaan ilkaha ka saartay
Wiilashaan maxkamada Sweden ayaa ku xukuntay xabsi daa’in
Arintii odayaasha Soomaalida oo gaadhay baarlamaanka Sweden